Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Duqayntii Maraykanku ka Fuliyey Somalia iyo Trump oo Wada Qorshe Dhabar-jab ku ah AMISOM
Thursday March 14, 2019 - 12:05:25 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by . .
Taliska Mareykanka ee Afrika ee loosoo gaabiyo AFRICOM ayaa war kasoo saaray duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Mareykanku ka fuliyeen deegaano kamid koonfurta Soomaaliya.
War qoraal ah oo kasoo baxay Taliska ayaa lagu sheegay in habeenimadii xalay ay diyaaradaha dagaalku weerareen fariisimo Alshabaab ku lahaayeen deegaanka Huleey oo ka tirsan gobalka Shabeelaha hoose.
Waxa ay sheegeen in duqeyntaasi diyaaradeed ay ku dileen ilaa 2 dagaalame oo ka tirsan Alshabaab hayeeshee uusan jirin khasaare kasoo gaaray dadka rayidka ee dagan deegaanka ay weerareen sida lagu yiri warka qoraalka ah.
Dhinaca kale Howl-galka ciidamada Amisom ee Soomaaliya ayaa waxa uu wajihi doonaa halis dhaqaale oo xooggan, oo sababi karta in ciidamada badan ay ka baxaan Soomaaliya, kadib go’aan kasoo baxay Madaxweynaha Dalka Maraynkan Donld Trump oo ku dhowaaqay miisaaniyadda dowladdiisa ee sanadda 2020, ayaa waxaa ku jiri dhimis xooggan oo lagu sameynayo lacagta Mareykanka uu ku caawiyo howl-galka Amisom ee Soomaaliya.
Qorshaha Trump ayaa ah inuu dhimso 65% lacagta Mareykanka uu ku bixiyo Amisom. Lacagtaas oo iminka ah sanadii 254 milyan oo dollar, ayaa waxaa laga soo reebi doonaa kaliya 90 milyan oo dollar. Qorshaha Trump ayaa waxaa ku jira in sanadaha xiga la joojiyo lacagtaas gebigeed.
Go’aanka Trump ayaa xaaladda kusii xumeyn doonta Amisom, oo markii horeba wajahaysay dhimis 20% oo ka timid Midowga Yurub.
Ganacsatada Xamar oo ku biiray qorshe odayaasha ay wadaan oo ka dhan ah Dawlada Faderaalka Soomaliya.
Wararkii ugu dambeeyey Ee Sarkaal Ka tirsan ciidanka Somaliland oo xalay lagu diley Laas-canod iyo Dagaal dhexmaray ciidamo kawada Tirsan Somaliland
Wararkii ugu dambeeyey ee Howlgallo saakay ka socda Magalada Boosaaso iyo faah-faahin kasoo baxaysa
Wararkii ugu dambeeyey ee Iran Iyo Maraykanka oo laga Cabsi qabo in uu Dagaal ka Dhex qarxo
Daawo:Wafti ka Socda Baarlamanka Ugandha oo la kulmay Baarlamanka Somaliland iyo Nuxurka Wada hadal Dhexmaray.
Milatariga Suudan iyo Hogaamiyasha Banaanbaxyada Dalkaasi oo Wada gaadhay Heshiis